【Intaba Yasemuva Nenja】 Iyathengeka futhi Ilula｜Lala kahle ebusuku egunjini labantu abasha ehostela lentsha｜Imboni Yoshukela yaseTaitung｜Enobungani nezilwane ezifuywayo｜Indawo yokupaka efanelekile｜Indlela ehamba phambili ezungeze isiqhingi - I-Airbnb
【Intaba Yasemuva Nenja】 Iyathengeka futhi Ilula｜Lala kahle ebusuku egunjini labantu abasha ehostela lentsha｜Imboni Yoshukela yaseTaitung｜Enobungani nezilwane ezifuywayo｜Indawo yokupaka efanelekile｜Indlela ehamba phambili ezungeze isiqhingi
Taitung City, I-Taiwan
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Sinny
①Kuthatha ngaphansi kwemizuzu eyishumi ukushayela usuka endaweni yedolobha kanye nesiteshi sikaloliwe
②Ukuvulwa okusha ngo-2019! Igcwele ngokugcwele ♪
③Isitezi sokuqala yisitudiyo somshado somnikazi, ungasizama uma unentshisekelo!
Kuthatha imizuzu eyi-10 kuphela ukushayela usuka e-Taitung Railway Station Line ukuya e-B&B. Kuthatha amaminithi angu-5 kuphela ukushayela ukuya endaweni yasemadolobheni usuka e-B&B. Kuthatha iminithi elingu-1 kuphela ukuya e-Taitung Sugar Factory. Kuwe othanda ukuhamba ngokukhululeka. ka Taitung, lena indawo enhle kakhulu..
【Ukuvulwa okusha ngo-2019! Ihlonyiswe ngokugcwele ♪】
Maphakathi noJulayi, u-Banniang walandela ezinyathelweni zomyeni wakhe ukuze ayeke umsebenzi wakhe e-Taipei futhi weza e-Taitung ezovula isitolo sakhe somshado. Lolu hlobo lwegumbi yisitudiyo esisitezi sesithathu. Sizozama ngakho konke okusemandleni ukugwema ukungqubuzana phakathi kokudubulana. isikhathi check-in isikhathi sakho, kodwa Uma uhlale isikhathi eside futhi ezingqubuzana sokudubula isikhathi sethu, thina siyokwazisa wena kusengaphambili, sicela ukuhambisa izinto zakho kancane. Lolu hlobo lwegumbi ludinga ukwabelana ngendlu yokugezela no-Bannieng. U-Banniang ngokwakhe uthweswe iziqu ekwakhiweni kwesikhala futhi uphishekela indawo yokuhlala enethezekile. Uma udinga ukusebenzisa ikhishi nempahla yokuwasha, ungasitshela ukuthi sethemba ukuthi ungajabulela okuhlangenwe nakho kwendawo yokuhlala enethezekile lapha. Uma udinga insizakalo eyengeziwe yombhede, engeza u-300$ ngomuntu ngamunye, kunikezwa umatilasi we-latex ongu-5 cm kuphela ~
Isitolo somshado esitezi sokuqala, uma unesithakazelo futhi ufuna ukusizama, uma isikhathi sivuma, i-Banniang iphinde ijabule ukuhlinzeka ngezinsizakalo. Ngaphezu kwalokho, sine-collie emngceleni, futhi siqonda ngokugcwele ubunzima bokuthola indawo yokuletha izilwane ezifuywayo ohambweni lwebhizinisi nokuhamba, ngakho-ke siyakwamukela ukuthi ulethe izilwane ezifuywayo ukuze uhlale nathi.
5 cm umatilasi we-latex
Amathawula okugeza, amathawula, izikwele ezincane
4.77 · 56 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Taitung City namaphethelo